Warbixin Qarammada Midoobay ku Shaacisay in Yuhuuddu Midab-takoor Dawli ah Kula Dhaqanto Falastiin
Home WARARKA Warbixin Qarammada Midoobay ku Shaacisay in Yuhuuddu Midab-takoor Dawli ah Kula Dhaqanto...
New York (MK)-Warbixin cusub oo Qarammada Midoobay diyaarisay, ayaa lagu shaaciyey in dawladda Israa’iil ay nidaam midab-takoor dawladeed ah (apartheid) kula dhaqanto dadka reer Falastiin, kaasoo ay cagta hoosteeda ku geliyeen dhulka iyo dadka Falastiin.
Warbixinta la soo bandhigay ayaa lagu caddeeyey in maamulka Yuhuuddo ay hirgeliyeen nidaam si cabiidnimo ah loogu cadaadiyo dadka reer Falastiin, lagulana wareegay dhulkooda, kaasoo la mid ah midab-takoorkii lagula dhaqmi jiray dadka Koonfur Afrika muddadii u dhexaysay 1948 ilaa 1991-kii, waxaannu nidaamkani ka soo horjeeda dhammaanba shuruucda caalamiga ah ee lagaga dhaqmo dunida.
Guddida Dhaqaalaha iyo Arrimaha Bulshada ee UN-ka u qaabilsan galbeedka qaaradda Aasiya ee la yidhaah ESCWA (the UN Economic and Social Commission for Western Asia) oo warbixintan diyaariyey, isla markaana ku soo bandhigay magaalada Beirut ee dalka Lubnaan, ayaa loogu baaqay dalalka caalamka inay qaadaan tallaabooyin wax lagaga qabanayo nidaamka qalafsan, kana baxsan bani’aadanimada ee Israa’iil kula dhaqanto reer Falastiin.
“Waxa aannu ku baaqaynaa in dawladaha caalamku qaadaan tallaabooyin lagu taageerayo in la qaadaco, maalgelintana lagala noqdo Israa’iil, isla markaana lagu soo rogo cuno-qabatayno kala duwan si wax looga qabto dulmiga lagu hayo Falastiin.” Sidaa waxa lagu yidhi warbixinta ka soo baxday UN-ka oo wargeyska Jamhuuriya ka soo xigtay Al-jazeera xalay.
Waxa kaloo ay warbixintu intaas ku dartay; “Dawladda Israa’iil waxa ay dambi ku gashay siyaasadaha iyo ficilada nidaamka dawliga ah ku salaysan ee ah midab-takoorka dambiga ah, kaasoo ka soo horjeeda bani’aadanimada marka loo eego shuruucda caalamiga ah iyo axdiga lagu aasaasay Maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC.”
Warbixinta ka soo baxday Qarammada Midoobay, ayaa lagu iftiimiyey in shuruucda ay soo saareen hay’adaha sharci-dejinta Israa’iil ay ku wada salaysan yihiin siyaasadaha iyo ficilada ah in nidaamkooda dawladnimo yahay xukuumad midab-takoor ah (apartheid regime).
“Dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool bariga magaalada Qudus amma Jerusalem, waxa ay la kulmaan tacadiyo fool oo lagaga faquuqo inay helaan adeegyada waxbarashada, daryeelka caafimaadka, shaqaalaysiinta, degenaanshiyaha iyo xuquuqda dhismayaasha, waxaanna intaas dheer in dhulkooda laga caydhiyo, lana dumiyo guryahooda,” ayaa lagu yidhi warbixinta la soo saaray, waxayna intaas raacisay; “Dadka Falastiin ee ku dhaqan degaannada Daanta Galbeed (West Bank) iyo Marinka Qasa (Gaza Strip) waxa lagu maamulaa sharci millatari, iyadoo dadka Yuhuudda ah ee halkaas kula nool lagu dhaqo xeerarka madaniga ah ee Israa’iil u yaal, taasina waa midab-takoor dambi ah.”
Dhinaca kale, Ergayga Israa’iil u fadhiya Qarammada Midoobay Mr. Danny Danon, ayaa qoraal uu soo saaray ku cambaareeyey warbixinta la shaaciyey Arbacadii toddobaadkan, waxaannu yidhi; “Iskudayga lagu doonayo in lagu faafiyo, isla markaana sida been-abuurka ah loogu ceebaynayo dalka qudha ee dimuqraadiga ah ee ku yaal Bariga Dhexe waa mid aan sal iyo raad lahayn oo aan sinaba loo aqbali karin.”
Previous articleDulsaarka daynta iyo dheefta iibka ee Baananka (Qaybti 2aad)
Next articleBerbera oo aas Qaran loogu sameeyay 17 qof oo Taliskii Siyaad Barre ku xasuuqay